Kutheni sihambisa izipho ngeKrisimesi? Izithethe Zembali - Ikrisimesi Izipho
Kutheni sihambisa izipho ngeKrisimesi? Izithethe Zembali
Ukuxakeka nokuxakeka kweli xesha maxa wambi kusitha izizathu zesiko lokupha izipho ngeKrisimesi. Nangona kunjalo, isiko elisekwe kwimbali. Isiko likwabonisa isidingo somntu sokubonisa umbulelo nothando.
Izithethe zeMbali yokuNika iZipho
Isiko benika izipho phakathi ebusika isusela kudala ngaphambi kokuzalwa kukaYesu. Amasiko amaninzi okuqala, anjengamaRoma kunye neNorse, ayeneminyhadala yasebusika eyayiquka ukupha izipho.
13 Umzuzu wokugqibela Izipho zeKrisimesi ezingayi kukudanisa
Saturnalia Umbhiyozo kaDisemba
Uthixo wezolimo ongumhedeni wezolimo, uSaturn, wayebhiyozelwa ebusika. ISaturnalia ibibhiyozelwa ngoDisemba 17. Nangona kunjalo, ngexesha elithile kwiRiphabhlikhi yaseRoma yakudala (133-31 BC), iSaturnalia yaba ngumbhiyozo omkhulu. Ukuqala ngoDisemba 17, abemi babhiyozela iveki yonke. ISaturnalia yayiyimigcobo kunye nazo zonke iintlobo zeziganeko. Eminye yemibhiyozo yayiquka ukunika izipho kunye nokubingelela uSaturn.
ISaturnalia nokuTshintshiselana ngezipho
Ngoku ka Imbali.com , I-Saturnalia yayiyiveki evuthayo ekwabandakanya ukutshintshiselana ngemifanekiso yodongwe, iSignillaria, echazwe njengeempawu zokubingelela ngabantu ezazisenziwa njengenxalenye yemibhiyozo yamandulo yobuhedeni.
Ukwamkelwa kweSipho esiNika iKrisimesi
Esi sithethe sokubhiyozela kunye nokuphana izipho yayisesinye sezithethe ezininzi ezamkelwa bubukristu njengendlela yokudibanisa ezi nkcubeko zibe yinkolo yobuKristu. Isiko lokupha izipho ngeKrisimesi yayikukwamukelwa ngokwendalo kwezi kunye nezinye izithethe zamaxesha onyaka, ezinje ngokukhanyisa amakhandlela, iingoma zokubhiyozela, kunye nokwenza amatheko amnandi.
Iindlela ezahlukeneyo zokunika izipho zeKrisimesi
Ixesha leKrisimesi lixesha eliqhelekileyo lokupha izipho. Asinguye wonke umntu onika izipho ngendlela efanayo. Amasiko ngamasiko aseYurophu afakwa kwimibhiyozo yeKrisimesi. Inye kuphela le mibhiyozo inamabali afana nawabantu abaphe izipho.
USt Nicholas ngoyena mntu ubalaseleyo kuninzi lwezipho zaseYurophu. USt. UNicholas wanyanzelisa ukuba nguBawo weKrisimesi kwaye kamva eMelika waya kumfanekiso obalaseleyoUsanta Claus.
Ngoku ka Inkcubeko yaseJamani , eJamani, eHungary, eSwitzerland, kwiRiphabhlikhi yaseCzech, naseLiechtenstein bathumela iileta kuChristkind kwakhona bapela uChristkindl, intombazana encinci, ngendlela efanayo nendlela abantwana baseMelika ababhalela ngayo uSanta Claus,ukucela izipho. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu lukholelwa ekubeni izipho ziyahanjiswaEva iKrisimesi nguTata iKrisimesi.
IKrisimesi e-Italiiguquka ngeLa Befana, uhlobo lwexhegwazana likaSanta Claus. Amanye amabali amphosa njengegqwirha elinomntu ococayo okhwela umtshayelo kwaye wehla ngeetshimini nezipho zabantwana kwi-Epiphany (Ngobusuku beshumi elinesibini). Ukwabizwa ngokuba ucoca imigangatho ngaphambi kokuba abaleke.
Ibali ngasemva kweLa Befana
IEncyclopedia Britannica Uthi uLa Befana wayeza kuhamba namadoda amathathu alumkileyo ukuya eBhetelehem, kodwa wathi wayexakeke kakhulu ukuba angaya. Wathembisa ukubuyela kubo xa bebuya, kodwa ibali libanga ukuba iZilumko ezintathu zahamba zaya ekhaya ngendlela eyahlukileyo. ULa Befana uchithe ubomi bakhe bonke ebakhangela. Olunye uguqulelo lweli bali litshintshe ingqondo yakhe kwaye wazama ukufumana ikharavani kwaye wanika abantwana izipho kuba engakwazanga ukuyinika uKristu umntwana.
UMthendeleko wooKumkani abathathu
Isikhokelo kubakhenkethi eBarcelona Qaphela isiko lokupha izipho livela kuMthendeleko wooKumkani abathathu okanyeUmthendeleko we-Epiphany. Abantwana babhalela ooKumkani abathathu ngendlela efanayo ngendlela abantwana baseMelika ababhalela ngayo uSanta Claus. NgoJanuwari 5, iiKumkani eziNtathu ziyafika zinike abantwana ilekese. Ngobo busuku abantwana bashiya izihlangu zabo kufutshane nefestile (efanayo nesiko lokugcina impahla ngeKrisimesi) ukuze bazaliswe zizipho abazicelileyo. Kuhlala kukho umngcipheko wokufumana isigaxa samalahle ukuba bebembi. Ezinye iintsapho ziye zamkela isithethe seKrisimesi esentshona somthi weKrisimesi kunye nezipho ezivela kuSanta Claus.
Kutheni le nto iintetho zibekwa phantsi komthi
Imihombiso yeKrisimesi yoqobo yayizizipho zeelekese, iikeyiki, iicokies, iiapile kunye nezinye izipho ezincinci. Iikawusi zazizaliswe zizipho. Ixesha elingaphezulu, umhombiso osisigxina uthathe indawo yezipho ezityiwayo, kwaye izitokhwe zahlala, kodwa njengoko isiko lalikhula, kunjalo ke iintlobo kunye nobukhulu bezipho. Ngokuhambelana nesiko lasekuqaleni lezipho emthini, izipho ezinkulu kakhulu ezitokisini zafumana indlela yazo phantsi komthi kunye nokuphathwa okutyiwa emthini kwafudukela kwisitokhwe seKrisimesi.
Ke kutheni siNika izipho ngeKrisimesi?
Ixesha lixesha eliqhelekileyo lokunika izipho. Kodwa kukho izizathu zobuqu zokuba kutheni abantu benika izipho zeKrisimesi kwaye bazinika bani. Izizathu ziyahluka ngokwahlukeneyo, kodwa kukho imixholo efanayo.
Enye impembelelo eyaphefumlela ukunika izipho ngeKrisimesi yayilibali lokuzalwa. AmaKristu ayacaphula Izazi ezithathu, okanye iZazi, njengomxholo weBhayibhile wokupha izipho ngexesha leKrisimesi. UMagi wazisa izipho zegolide, intlaka yempepho kunye nemore ku-Baby uYesu esemkhumbini.
Ukulingisa la madoda mathathu alumkileyo
Ezi zinto zixabisekileyo zibonakalise imbeko nentlonipho kwizilumko ezinayo ngoNyana kaThixo. AmaKrestu nawo ngokufanayo anikezela ngezipho kumalungu osapho, kubahlobo nakwabasweleyo njengendlela yokukhumbula aZilumko ezintathu ezihlonipha uKrestu umntwana. Inkcazo yale mihla yesiko kukwamkela ukuba iKrisimesi ngumhla wokuzalwa kukaYesu. Kuba ukunika izipho zomhla wokuzalwa kuye akunakwenzeka, endaweni yoko abantu banikana izipho omnye komnye ukubhiyozela usuku.
Izipho zeKrisimesi lixesha lokumangalisa kwaye sonwabe abo sibathandayo. Abantu bayakonwabela ukufumana eso sipho sigqibeleleyo. Nje ukuba isongelwe kwaye ihanjiswe, lowo uphayo ubukele ubuso bonwabileyo bommkeli xa eyityhila.
Umlingo weKrisimesi yeNostalgia
Kukho into ekhethekileyo malunga nokulindelwa kwabantwana kunye nethemba ngeli xesha lonyaka. Izandla ezincinci azinakuhlala kude nezipho ezisongelwe phantsi komthi. Abantu abadala babuyela ebuntwaneni babo kwiKrisimesi enomdla kunye nothando.
Amashishini asebenzisa eli xesha lonyaka ukunyusa kunye nentengiso. Iifemu ezininzi ziya kuthumela izipho kubathengi abaxabisekileyo ukubabulela ngeshishini labo. Ukunika izipho ikwayindlela yokubhengeza inkampani kunye nokukhuthaza ubudlelwane obunomdla noluntu.
Abantu abaninzi basebenzisa ixesha leKrisimesi njengendlela yokubulela abantu ngeenkonzo zabo kunye nemizamo yabo kunyaka wonke. Abantu banika ezi zipho kubantu abahlukeneyo, ezinje:
Ukuhanjiswa kwamaphephandaba abantu
Amashishini anika izipho kubasebenzi ukubonisa uxabiso ngomsebenzi kunyaka ophelileyo. Ngamanye amaxesha ezi zipho zikwimo yemali, njengebhonasi yeKrisimesi; ngamanye amaxesha zikwimo yezatifikethi zezipho.
Esinye isipho esiqhelekileyo sokunika isipho kukunikela kwizibonelelo. Ngokuhambelana nemigaqo yobuKristu yokunceda abo basweleyo, abanikeli banika imali okanye banikele ngezinto, ezinje ngokutya nempahla. Iminikelo yeKrisimesi yinxalenye ebalulekileyo yohlahlo-lwabiwo mali lokunyusa imali.
Izizathu ezininzi zokuba sinikezele ngeKrisimesi
Ngelixa izizathu zokunikela ngezipho zahlukile, eli siko lenze ukuba ixesha leKrisimesi ligcwele zizimanga novuyo. Isithethe sokuphana izipho ngexesha leKrisimesi sineenkulungwane sidala, kwaye sikhumbuza abantu ngokuzalwa komlingo esitalini kudala.
Amakhethini E Dapes Malunga Toys Ukutya Pairings Ekhaya School Slideshows Ukungathembeki
Ungasifaka kanjani isicelo somsebenzi kwiWalmart
yintoni inombolo elungileyo ye-efc
zide kangakanani izinja zithwale iinjana
ukhetho lwe-gluten simahla kwi-taco bell
iileta zesondo kumfana osentolongweni